Maraoka: Ny fanandràmana ny henné · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 29 Jona 2010 18:13 GMT
Vakio amin'ny teny Français, Nederlands, македонски, Español, 简体中文, Italiano, 繁體中文, বাংলা, عربي, русский, Ελληνικά, English
Efa an'arivontaona maro izao no nisian'ny “henné” amin'ny maha-zavakanto azy. Hita manomboka any Maraoka hatrany Bangladesh, ampiasaina handokoana volo sy hanaingoana vatana ny “henné”. Any Maraoka dia ampiasaina hanaingoana ny tànana sy ny tongotra amin'ny kisarisary sarotra ny “henné”, ary koa handokoana volo any amin'ny “hammam“.
Manana blaogy ihany koa ireo mpanoratra ilay boky, ao amin'ny Moor Henna.
Vao haingana i Emily, mpirotsaka antsitrapo ao amin'ny “Peace Corps” (Emily and Jon in Morocco) no nanandrana ny henné voalohany indrindra. Mamoaka sarin'ny fanaovana henné any amin'ny teram-piasàny fanaovana taozavatra izy ao amin'ny blaoginy: